Lazada SG အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（36.1MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Lazada SG - #1 Online Shop App
New Lazada ™မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုကြိုဆိုပါ၏။ မိုဘိုင်းပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းစျေးဝယ်အတွေ့အကြုံအတွက် Lazada တွင်စျေးဝယ်သူသန်းပေါင်း 140 ကျော်ပါ0င်သည်။ Lazada Great Myanmar ရှိ Lazada Great Myanmar ရှိ B
နှင့်အတူဝင်ရောက်ခြင်း စင်ကာပူလက်လီအရောင်းဆိုင်များအသင်း, ဤ GSS 2021 သည်ပျော်စရာကောင်းသောစူပါအွန်လိုင်းစျေးဝယ်ပွဲဖြစ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဇွန်လတစ်လလုံးတွင်ဇွန်လတစ်လလုံးတွင် Facewastic Baby (7-14), Mega Home Fair (10-14), အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့ (15-17), အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့ (15-17), အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့ (18-17), ), ကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပ fiesta (22-26) နှင့်ဖက်ရှင်အပတ် (27-30) ။ သင်၏နေအိမ်များမှမထွက်ဘဲအွန်လိုင်းမှအနေဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်သင်၏ယုံကြည်ရသောအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ရောင်းသူများ၏ပစ္စည်းများကို0ယ်ခြင်းမပြုဘဲစတင်ပါ။
သင့်ရဲ့ပထမ0ယ်ယူမှုအတွက်အနည်းဆုံးဖြုန်းတီးရန်အတွက်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ5ဒေါ်လာကိုရယူပါ။
Daily Flash အရောင်းနှင့်ဘောက်ချာ
သည်သီးသန့်အက်ပလီကေးရှင်းများသာပါ0င်သော app များ, အွန်လိုင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အထင်ကရမဟုတ်သောတရားဝင် Lazmall စတိုးဆိုင်များပါ0င်သောလာမည့်အရောင်းနှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများနှင့်အတူအဆင့်မြှင့်တင်ပါ။
) မှာမှန်တယ် Samsung, Dyson, Xiaawei, Adidas တို့အပါအ0င်သင်၏လက်ချောင်းများ, Nike, Estee Lader, L'Oréal, L'Oréal, Nike, Nike, Nike, Nike, L'Oreds, Nestle,
သည်စစ်မှန်သောထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုစစ်ဆေးပါ, ရောင်းချသူအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုကြည့်ပြီးရောင်းသူများနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။ ပြန်အမ်းငွေကိုတောင်းခံရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လွယ်ကူသောပြန်လည်ပေါ်လစီကိုသာလိုက်နာပါ။
★ $ 60 ကိုရယူပါ ပထမ ဦး စွာအမိန့်
>> မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပစ္စည်းများ 1000 ကျော်နှင့်စျေးနှုန်းကိုက်ညီမှုပေးရန်သင့်အားအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။
အသစ်သောအသီးကိုသီးရွေးချယ်ခြင်းမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်0န်ဆောင်မှုကိုသင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည့်အရည်အသွေးကိုယူဆောင်လာပါလိမ့်မည်။
ပစ္စည်းပေါင်း 80,000 ကျော်ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးတယ်, ဒေသတွင်းရောင်းသူ 1000 ကိုကိုယ်စားပြုတယ်, 15 နိုင်ငံကနေတိုက်ရိုက်တင်သွင်းမှု။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်စားစရာခန်းမများမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, ကလေးအသုံးအဆောင်များနှင့်အခြားပစ္စည်းများအထိ။
ub u> app Highlights:
နေ့စဉ်ကမ်းလှမ်းမှုများအတွက်အထူးသတိပေးချက်များ, & အထူးလျှော့စျေး
* ကိုယ်ပိုင်အကြံပြုချက်များ - ကိုယ်ပိုင်အကြံပြုချက်များ, အမျိုးအစားများ, စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်း, အဆင့်, အရောင်များ, အရောင်များနှင့်နောက်ထပ်ပိုမိုများပြားခြင်း * သည်အမျိုးအစား, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, စျေးနှုန်း, အရောင်များနှင့်နောက်ထပ်
Direct Customer Interaction-Selle Interaction
Facebook နှင့် Facebook နှင့် Google မှတစ်ဆင့် Log-in: Facebook နှင့် Google မှတစ်ဆင့်မျှဝေခြင်း * Facebook, Twitter, Google နှင့် More
*** အရှေ့တောင်အာရှတွင် Trust Online Shopping Destination! ***
ဖိလစ်ပိုင်, စင်ကာပူ, ထိုင်းနှင့်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ။
မကြာသေးမီအဖွဲ့များကတတိယပါတီမှလှည့်စားခြင်းဖြင့်0န်ဆောင်မှုပေးသည်။ များသောအားဖြင့်ကြော်ငြာများ, များသောအားဖြင့် site redirection, ဘောက်ချာနှင့်ဂိမ်းအတု။ ဤကြော်ငြာအမျိုးအစားများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲမြှင့်တင်ပေးသည်။ ဤအပြုအမူအမျိုးအစားကိုသင်ကြုံတွေ့ရပါက ကျေးဇူးပြု. ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါ။ [email protected] ကိုဆက်သွယ်ပြီး CAME ကိုကူးယူပါ ငါတို့ဒါကိုအဆုံးသတ်နိုင်အောင် A'av ။
ဘာအသစ်လဲ Lazada SG - #1 Online Shop App 6.99.1